Ka faa'iideyso biyaha markaad fuushan tahay baaskiil | Ragga Stylish
Kristof Retezar kaliya keenay hal-abuurnimo weyn. Qalabkan ayaa si gaar ah loo soo saaray si loogu xidho a baaskiil waxay u oggolaaneysaa in huurka hawadu u beddelo biyo la cabbo. Farsamadu way fududahay, hawada qoyan waxay ku qulqulaysaa qalabka, ka dib waa la qaboojiyay iyadoo ay ugu wacan tahay saameynta Peltier ee ay ku shaqeyso tamarta qorraxda.
Markaas ayuu hawada Waxay u gudubtaa qolka sare halkaas oo jajabku uga soocayo biyaha derbiyo yaryar oo daloola. Ugu dambeyntiina, biyuhu waxay ku qulqulayaan tuubbada si loo buuxiyo dhalo.
Iyada oo gacan laga helayo tan qalab, waa suurtagal in lagu buuxiyo dhalada 50 sentiliter hal saac oo kaliya. Si kastaba ha noqotee, qalabka ayaa waxtar badan qoyan noqo waqtiga.
Ma ogtahay in jawiga wuxuu ka kooban yahay 12 bilyan oo tan oo biyo ah iyo in kheyraadkan aan laga faa'iideysan? Qalabkan cusub ayaa u oggolaan doona inuu adeegsado kheyraadkan tiro badan. Sidaas, Kristoff Soo hel ayaa u soo bandhigay mashruuciisa James Dyson Awards. Waxa la xasuusto ayaa ah in qalabkani uu yahay mid aad wax ku ool u ah socodka dhaadheer iyo dalxiisyada kale ee ka fog dukaamada, laga helo ilaha iyo meelaha ay ka socoto Agua cabi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Ka faa'iidayso biyaha markaad baaskiil wado
Halloween: Sidee loo abuuraa Ryan Gosling muuqaalkiisa 'Drive'